Khasaaraha Qarax Muqdisho ka Dhacay oo Kordhay – Radio Daljir
Abriil 21, 2015 10:31 b 0
Talaado, Abriil 21, 2015 (Daljir) — Ugu yaraan 12-qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhashay gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay oo duhurnimadii maanta ku qarxay illinka hore maqaayad lagu magacaabo Banoda oo cunnada laga cuno oo kasoo horjeedda Hoteelka Central ee magaalada Muqdisho.
Qaraxan oo ahaa mid xooggan ayaan la ogeyn dhimashada iyo dhaawaca rasmiga ah ee ka dhashay, iyadoo goobta uu qaraxu ka dhacay lagu arkayo dhiig badan oo daadsa, iyadoo ay halkaas gaareen ciidammo fara badan oo kuwa dowladda Somalia ka tirsan.
\_”Waxaan illaa hadda qaadnay maydadka 11-ruux iyo dhaawaca labaatameeyo kale, welina wuu socdaa gurmadkii aan u fidinayay dadka ay dhibaatadu soo gaartay,\_” ayuu yiri mid ka mid ah darawallada wada gaadiidka gurmadka deg-degga ah ee Muqdisho.
Sidoo kale, qaraxan ayaa dhacay xilli maanta aad loo adkeeyay ammaanka Muqdisho; mana jirto weli cid sheegatay mas\_’uuliyadda qaraxan, inkastoo qaraxyada Muqdisho ka dhaca ay inta badan sheegato Xarakada Al-shabaab ee Soomaaliya.